UMkhumbane (Cato Manor) ilokishi elithuthuka ngamandla kodwa elibhekene nezingqinamba ezahlukahlukene
Usuku: NgoLwesihlanu 5 April 2013
Indawo: CCS Seminar Room 601, 6th Floor, Memorial Tower Building, Howard College, University of KwaZulu-Natal
UMkhumbane, umhlaba oseduze kakhulu neTheku owawukhokhelwa intela abahlali ababesuka emakhaya bezofuna umsebenzi eThekwini eminyakeni eyikhulu nesigamu edlule, manje sekuyilokishi elikhulu kakhulu. Uqala-nje uMkhumbane kwakuhlala kuwo izinhlanga ezahlukene kodwa kwathi sekubusa uhumuleni wontamolukhuni bamaBhunu, izizwe ezazizinde khona zahlukaniswa – abomdabu baseNdiya bayiswa koChatsworth, abamaKhaladi eNewsland East, naseWentworth kwathi abampisholo bayiswa koMashu, Lamontville, Umlazi nakwezinye izindawo.
Emva kokuba sekungene uhulumeni wombuso wentando yeningi lomhlaba ubuyele ezandleni zabantu. Abahlali abaningi baseMkhumbane ngabasebenzi abaqhamuka ezindaweni zasemaphandleni KwaZulu naseMpumalanga Kapa kanti likhona nedlanzana eliqhamuka emazweni angaphandle njengaseMozambique naseAngola. Lendawo iqale yaba izakhiwo zemijondolo kwathi isiphethwe iKhansela uNompumelelo Chamane yangena ngaphansi kohlelo lweEuropean Union ngokubambisana neRDP, kwakhiwa izindlu zomxhaso ezinamanzi nogesi, imigwaqo yetiyela, izikole kanye nomtholampilo.
Kodwa akusho ukuthi iyindawo engenazinkinga, kulenkulumo ngoMkhumbane uzozwa ukuthi abantu bakhona benza njani ukubhekana nezingqinamba zokuhlala kulendawo enobugebengu, nabafana ababhema izidakamizwa, ukuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezakhiwo ezifana nalapho okwakugcinwa khona izinja phecelezi iSPCA, nokuthi isakhiwo esasizobasiza basichitha kanjani ngenxa yokuthi umasipala wayengaqalanga waxoxa nabo, ibio gass digester. Uzozwa ngesizinda samaphoyisa esidume njengesezinkabi kwaKito esesibulale cishe abantu abangaphezulu kwamashumi amahlanu.
Izikhulumi: Faith ka-Manzi uyintatheli kanye nombhali wezinkondlo oseneminyaka eyevile kweyishumi ehlala eMkhumbane (Cato Manor). Uka-Manzi wazalelwa eThekwini eminyakeni engamashumi amane nesihlanu edlule, ngonyaka ka1999 watheswa ijazi leminyezane ezifundweni zesiNgisi kanye nezomlando esikhungweni semfundo esasaziwa ngeUniversity of Natal okumanje esesaziwa ngeUniveristy of KwaZulu-Natal. Uqale wacoshela izinhlangano zezindaba okubalwa iDaily News naloph aye novo lwakhe (iKeeping the Faith), iMail&Guardian, iSAPA, iBusiness Day, iSundayWorld, iSABC njalonjalo. Uke wasebenza eminyakeni engaphambilini njengomxhumanisi womphakathi esizindeni samaciko eBat Centre kanti usebuye waphindela khona futhi lapho esebenze khona nezingwazi zomculo ezifana noBusi Mhlongo, Sipho Gumede kanye noMadala Kunene. Njengamanje uFaithka-Manzi uzinze esikhungweni saseUniversity of KwaZulu-Natal lapho ebhala futhi ehumusha nezimo ezimayelana nezenhlalakahle, ezomnotho ezombusazwe kanye nezemvelo ezibhekene ngqo nemiphakathi, abasebenzi kanye nabanhlwempu. Ubuye abhalele iphendandaba elisabalele umhlaba wonke elinabafundi abayisigidi iAfrica Report, imibhalo yakhe yaziwa ngeFaith’s Diaries, lapho ebhala khona ngokuthi ubhekana kanjani nezingqinamba zokuphila negciwane lengculazi. UFaith ka-Manzi ubuye athule izinkulumo zokukhuthaza abantu futhi anxenxe abantu ukuthi bazi isimo sabo sezempilo kanye nokuphila negciwane belingalilahlile ithemba. Ezinye zezinkampnai aseke wakhuluma kuzona zimbandakanya, uTelkom, abasebenzi bakaMasipala, iTransnet kanye nesikhungo saseUniversity of KwaZulu-Natal. Izincwadi asezishicilele ngokuhlanganyela nezinye izimbongi kanye nabanye ababhali yilezi ezilandelayo:
1. Sekuyantwela Emzansi (Maskewmiller&Longman)
2. Izimbali Zesizwe (Shuter &Shooter)
3. Undressing Durban (University of Natal Press)
UThandokuhle Manzi ungumfundi owenza unyaka wesithathu lapho egxile khona kwezokulawulwa kwezemvelo kanye nebalazwe, ezombusazwe kanye nezentuthuko esikhungweni semfundo ephakeme eUniversity of KwaZulu-Natal. Ubuye abe ngumcwaningi eCentre for Civil Society kanye ungomunye wochwepheshe abasebasha mayelana nezimo zezenhlalakahle, ezomnotho, ezombusazwe kanye nezemvelo mayelana nendawo yaseMkhumbane. Ibhungu elisanda ukuhlanganisa iminyaka engamashumi amabili lizelwe, uqale enkulisa yodade eUniversity of Natal ngo1998 wasefunda amabanga aphansi eGlenwood Junior Primary School, eSpringfield Park Senior Primary School, esikoleni samabanga aphezulu eHoly Family College lapho ahlomula khona ngemibala waqala imidlalo njengebasketbal kanye nebhola likanobhutshuzwayo.
Ngeminye imininingwane xhumana neCentre for Civil Society @ (031) 260 3195/3577